Allgedo.com » Drs Fowziyo Yuusuf “Waxaa balan ah inaan soo celino Safaaradihii Soomaaliya ee caalamka”
Wasaarada Arimaha Dibada Soomaaliya waxaa marki ugu horeysay qabatay Gabar Soomaaliyeed, waxaana xilkan loo dhiibay Marwo Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan.
Wasiirada Arimaha Dibada ayaa hada Bilowday shaqooyin aad u badan, kuwaasoo aysan qaban Wasiiradii kaga horeyay Kursiga, inkastoo Ragi kaga horeeyay la leeyahay waxa ay wasiiro ka ahaayeen Dowlad aan awood u lahayn inay Hantideeda soo cxeshoato.
Marwo Fowziyo ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inay dib u soo celin doonto Hantidii Umada Soomaaliyeed ay lahaayeen, waxaana ay si gaar ah Carabka ugu dhufatay Hantidii Dowlada ay lahayd sida Maraakiibta, Diyaaradaha iyo Safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay Dalalka Caalamka.
Wasiirada ayaa shacabka si niyadsani leh ugu sheegtay inay ku guuleysan doonto dib u soo celinta Hantida Soomaaliweyn, iyadoo sheegtay inay dadaal dheer u galeyso arintaasi.
Sidoo kale waxa ay soo hadal qaaday Safaaradaha ay Soomaaliya ku leedahay Caalamka, maadaama dhulka safaaradaha ay iska leedahay Dowlada Soomaaliya, waxayna xustay in dib loo soo celin doono.
Drs Fowziyo ayaa shaacisay in hada safaaradaha Miiska saaran ay yihiin Safaaradaha ay Soomaaliya ku leedahay Talyaaniga iyo Mareykanka, kuwaasoo la sheegay inay dagan yihiin Dad ajaaniib ah.
Wasiirada ayaa sheegtay inaysan jirin cid Soomaaliya ku qabsan karta Dhulka iyo Guryaha Safaaradahooda ay ku leeyihiin Caalamka, iyadoo rajo wanaagsan ka muujisay inay dib u soo celiso.
Ugu dambeyna Wasiirada ayaa rajo wanaagsan ka muujisay in Afarta sano ee ay shaqeynayaan ay wax badan ka badali doonaan Dalka Soomaaliya, iyadoo sheegtay inay gaarsiin doonaan amaan iyo Dimuquraadiya.